Ugwu Scandinavian: àgwà, mmalite na ugwu | Netwọk Mgbasa Ozi
na Alps nke Sceneinavian Ndị kachasị mkpa dị na mpaghara Scandinavian ma dị na mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ Europe. Mpaghara a niile bụ Norway, Sweden na akụkụ nke Finland. A maara ugwu Scandinavia nke ọma n'akụkọ ihe mere eme mgbe ọ bụla edepụtarala mba Nordic. Ihe dị ka 25% nke mpaghara peninsula dum dị n'ime Arctic. Ọ bụ ugwu ugwu na-aga na mpaghara Scandinavia nke ọwụwa anyanwụ site na mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ na ndịda ọdịda anyanwụ maka kilomita 1700.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, mbido na akụrụngwa nke Alps Scandinavian.
2 Alps nke Scandinavian na peninshula
3 Isi scandinavian alps
Ọ bụ ugwu ugwu na-aga ofụri Scandinavian peninshula na nwere ngụkọta ogologo nke 1700 kilomita. E kewara ya na otu 3 dabere na ihe ị kewapụrụ. N'otu aka, ndị Kiolen bụ ọrụ maka ikewapụ Sweden na Norway, ugwu Dofrines kewara Norway na ndị Tulian nọ na mpaghara ndịda. Ihe a niile bụ akụkụ nke Ugwu Scandinavia nke dị narị nde anọ gara aga. E guzobere ugwu dị ugbu a nke na-etolite Alps Scandinavian n'ihi nkwekọrịta n'etiti etiti kọntinent nke North America na Baltic. Ihe a nile mere ihe dịka afọ 70 gara aga.
Alps nke Scandinavian apụtaghị maka ịdị elu ha, mana maka ịma mma ha na ụba bara ụba na ụdị dị iche iche dị na mbara igwe. Ebe kachasị elu bụ Ugwu Glittertind, mita 2452, na Galdhøpiggen, mita 2469, ma na mpaghara Norway. Aha peninsula ahụ sitere na Scania nke bụ okwu oge ochie ndị Rome jiri na akwụkwọ ozi njem ha. Okwu a na-ezo aka na mba Nordic. Site na mpaghara 1850 km site na ugwu ruo na ndịda, 1320 m site n’ọwụwa anyanwụ ruo n’ọdịda anyanwụ na ebe karịrị 750000 square kilomita, Nke a bụ peninshula kasịnụ na kọntinent Europe.
Alps nke Scandinavian na peninshula
Mmiri mmiri gbara gburugburu dum nke peninsula ahụ. N'otu aka ahụ, anyị nwere Osimiri Barents n'akụkụ ugwu, Oke Osimiri Ugwu na mpaghara ndịda ọdịda anyanwụ nke a na-etinye eriri nke Kattegat na Skagerra. Kattegat abụrụla onye ama ama n'ihi usoro Vikings ndị ama ama. N'ebe ọwụwa anyanwụ bụ Oké Osimiri Baltic nke gụnyere Gulf of Bothnia na n'ebe ọdịda anyanwụ bụ Osimiri Norway.
Mpaghara a dum gbara agwaetiti Gotland gburugburu na agwaetiti ndi kwurula nke Alland. Nri bụ otu dị n'etiti Sweden na Finland. Mpaghara a dum bara ọgaranya nke ígwè, titanium na ọla kọpa, ọ bụ ya mere o ji baa ọgaranya nke ukwuu kemgbe oge ochie. N'ikpere mmiri nke Norway Achọpụtakwara mmanụ na gas gas. Ọnụnọ nke nkwụnye ego ndị a nwere njikọ chiri anya na usoro ochie nke efere tectonic na magma nke nwere ike ịbanye n'etiti efere ahụ.
Alps nke Scandinavian na akụkụ mmiri ahụ dum nwere oke ugwu ugwu kacha mma. Ọkara mpaghara ahụ jupụtara na ugwu ugwu nke dị na Shield oge ochie. Ọta Baltic abụghị naanị ihe karịrị ntọala okwute malitere ihe dịka narị afọ anọ gara aga na nke kachasị nke ejiri okwute metamorphic mee. Nkume ndị a na-akpọ metamorphic na-esite na ngwa ngwa na-esiwanye ike nke mere n'ihi magma a chụpụrụ na efere ndị ahụ. Ọtụtụ ndị Scandinavia Andes nọ na Norway, ebe Sweden na ugwu ugwu niile gbadoro anya na ọdịda anyanwụ obodo ahụ. N'aka nke ọzọ, ọnụ ọgụgụ ndị dị na Finnish bụ ndị dị elu dị ala.
Dika mmasi, mpaghara ala a nwere otutu uzo di iche-iche nke gunyere oke osimiri, glaciers, ọdọ mmiri na fjords. Fjords dị n'ụdị V ebe ọ bụ na mmiri kere eke kere ya ihe ọdịdị nke oké osimiri bi na ya. Fjords nke Norway bụ ihe nnọchianya kachasị na nke a pụrụ ịhụ na usoro Viking. Ọ bụrụ n’ịga n’ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke mpaghara ahụ, anyị nwere ike ịhụ ugwu Alps nke Scandinavia nke a na-akpọkwa ugwu karịrị 2000 mita elu. Ọ bụghị naanị na ha dị elu ka amaara ha, kamakwa dị ka akara ama akara nke dị na mgbago ugwu Norway, Sweden na Finland.
E nwere ugwu karịrị otu narị na iri atọ n’ogologo, karịa mita abụọ n’ogologo. E kesara ha na mpaghara 7 a maara dịka: Jotunheimen, Breheimen, Reinheimen, Dovrefjell, Rondane, Sarek na Kebnekaise. Otutu ugwu di na Jotunheimen, na South Norway.
Isi scandinavian alps
Ka anyị hụ ndị bụ isi Scandinavian Alps dị ka ókèala ahụ si dị.
Ugwu kachasị elu na mpaghara mmiri Scandinavia niile dị na Norway. N'ezie, ugwu iri kachasị elu ma kesaa n'etiti ógbè Oppland na Song og Fjordane. Ugwu Galdhøpiggen, nke dị 2469 m, bụ ugwu kachasị elu na Norway na Scandinavian Peninsula. Ebe nke abụọ ka ugwu Glittertind bi na 2465 m n’ebe kachasị elu. Tupu ewere ya dị ka ebe kachasị elu, mana ọ bụ maka nha ndị e mere ka agụta glasia dị n’elu elu okike. Kemgbe ọtụtụ afọ glacier nọ na-agbaze ma ọ nweelarị ike ịme nha na ịhazi nke ọma.
Na Sweden enwere ugwu 12 gafere 2000 mita n'ogologo. Imirikiti n'ime ha dị na Sarek National Park na mpaghara ugwu nke Kebnekaise gosipụtara oke elu nke Kebnekaise na mita 2103. Ọ bụ elu kachasị elu na-echebara glaciers niile na-ekpuchi ya. Ọ bụrụ na glaciers ndị a anọghị, ugwu kachasị elu ga-abụ Kebnekaise Nordtoppen
Ọ bụrụ na anyị agaa n ’ọnụ ọnụ ugwu Finland, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha niile dị n’okpuru mita 1500 na ebe ndị kachasị ewu ewu nọ na Finnish Lapland. Ebe a na-anọchi Ugwu Halti dị elu nke mita 1324 na nke kachasị elu. Ọ dị na Norway ma nwee oke ugwu, Finland.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Scandinavian Alps na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Alps nke Scandinavian